Dowladda Ruushka oo xiriirka UEFA u gudbisay dacwad ka dhan ah maaliyadda xulka Ukraine uu ku ciyaarayo tartanka Euro 2020… (Maxay tahay fariinta siyaasadeed ee ay maaliyaddu muujineyso?) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Dowladda Ruushka oo xiriirka UEFA u gudbisay dacwad ka dhan ah maaliyadda xulka Ukraine uu ku ciyaarayo tartanka Euro 2020… (Maxay tahay fariinta siyaasadeed ee ay maaliyaddu muujineyso?)
June 9, 2021 at 10:54 Dowladda Ruushka oo xiriirka UEFA u gudbisay dacwad ka dhan ah maaliyadda xulka Ukraine uu ku ciyaarayo tartanka Euro 2020… (Maxay tahay fariinta siyaasadeed ee ay maaliyaddu muujineyso?)2021-06-09T10:54:51+02:00 CAYAARAHA
(Moscow) 09 Juun 2021. Dowladda Ruushka ayaa xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA u gudbisay warqad ay kaga dacwooneyso dalka Ukraine oo ay ku eedeyneyso inay maaliyadda ay ku ciyaareyso tartanka Euro 2020 ka muuqato farriin siyaasadeed.
Dhinaca kale, xiriirka kubadda cagta dalka Ruushka ayaa ku doodaya inay fariintaas lid ku tahay xeerarka aas-aasiga ah ee UEFA.
Maaliyadda xulka Ukraine ayaa xabadka ku wadata qariiradda dalkaas oo uu ku jiro jaziiradda ay maamusho Russia ee Crimea oo ay Ukraine ku xisaabsatay qariiraddeeda taaso si aad ah kaga careysiisay xukuumadda Moscow.
UEFA ayaa goor hore u sheegtay BBC-da inay ansixiyeen maaliyadda xulka Ukraine maadaama ay dhammeystirtay shuruudaha anshaxa ee xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, Ruushka ayaa Ukraine kala wareegay jaziiradda Crimea sanadkii 2014, waxayna u aragtaa qayb ka mid ah dhulkeeda, hase ahaatee, si caalami ah ayaa looga soo hor-jeestay.
Maaliyadaha xulka Ukraine uu ku ciyaaro oo kala leh midabbada Jaallaha oo ay kulammada mininka ku ciyaareyso iyo Buluug oo ay ku ciyaareyso kulammada martida ayaa waxaa xabadka kaga yaalla sawir xariiqmo Caddaan ah ka sameysan oo muujinaya qariiradda Ukraine oo lagu daray jaziiradda Crimea iyo gobollada bari ee Donetsk iyo Luhansk.
Si kastaba ha ahaatee, haatan waxaa UEFA ay heysaa dacwada ka timid Ruushka, balse waxay u badan tahay inuu sidii hore uu u ansixisayba go’aamin doono inay Ukraine ku ciyaari karto maaliyaddaas.
« Jubbaland oo war ka soo saartay askarta Soomaalida ee ‘la geeyey’ gobolka Tigray
Turkiga oo aqoonsaday 41 Jaamacadood oo ku yaalla Soomaaliya + Magacyada »